warkii.com » Ciidanka DF oo toogtay Wiil dhalinyaro ah & gacan ku dhiiglihii oo..
Ciidanka DF oo toogtay Wiil dhalinyaro ah & gacan ku dhiiglihii oo..
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalada ka haaya dhismaha ka socda wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa ay Barqanimadii Maanta toogasho ku dileen Wiil Dhalinyaro ahaa.
Wiilka la dilay oo lagu Magacaabi jiray Catoosh Xaaji Cali ayaa Ciidamada toogteen,isaga oo kamid ahaa dadka isticmaalayay wadadaas,waxaana warar kala duwan ay kasoo baxayaan ssababta ka dambeeysay dilkaas.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in mid kamid ah askarta uu toogtay Wiilka dhalinyarada ahaa,isla markaana uu goobta ka baxsaday,waxaana goobta tegay ehellada Wiilka la dilay, iyaga oo meydka halkaasi kasoo qaaday.
Wiilka Dhalinyarada ahaa ee la dilay laguna Magacaabi jiray Catoosh ayaa waxa uu ahaa wiil mu alif ah ama curiye, iyada oo dhalinyaro badan oo kamid ahaa saaxiibadiis oo goobta tegay ay sheegeen inay aad uga naxeen dilka saaxiibkood.
Wadada isku xirta Magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa shalay dib ugu bilaawday dhismaha wadada laamiga ah oo hakad ku jiray Shantii bilood ee la soo dhaafay,kadib markii ay kusoo bateen weeraro joogta ah oo Al-Shabaab la beegsanayeen Injineerada u dhashay Turkiga ee wadadaasi dhisayay.